I-Dubai International Finance Center | Izinkampani Zomthetho eDubai
I-Dubai International Finance Center
Abameli bethu baphawula ngokukhethekile e Dubai International Financial Center (DIFC) futhi ube neqembu elizinikele elikunikeza amacebiso kuzo zonke izici eziphathelene ne-DIFC, kuhlanganise nokusethwa nokusebenza kwezimali, izikhungo zezezimali nezinkampani eziphakathi. Siphinde seluleka ngokugunyazwa kwemisebenzi, imvume yokulawula evela ku I-Dubai Financial Service Authority (i-DFSA), ukusebenza nokuhlanganyela ku-NASDAQ Dubai nazo zonke izinkinga ezihambisana nokuhambisana. Ithimba lethu limelele amaklayenti maqondana nokuphenywa yi-DFSA futhi selulekwa ngokuphathelene nesenzo sokuphoqelela esithathwe yibo.
I-Dubai International Financial Centre iklanyelwe ukuba ibe yindawo engenawo imali ehlinzeka ngohlaka oluhlukile, oluzimele lomthetho kanye nokulawula ukuze kutholakale indawo yokukhula, inqubekela phambili nokuthuthukiswa komnotho kuwo wonke ama-United Arab Emirates nasezindaweni ezibanzi. Izinkantolo ze-DIFC zinamandla ngaphezu kwezindaba eziningi zomphakathi nezentengiselwano ezenzeka ngaphakathi kwe-DIFC, kanye namandla azo amazwe onke.
Ithimba lethu lihola insimu ekucebiseni amaqembu ngesikhathi sokuphenywa kwe-DFSA futhi uma kunesidingo, ukuxoxisana ngezikhalazo egameni labo. Umkhuba wethu wawufundiswe yi-firm first yokugunyazwa ukuba ihlawuliswe yi-DFSA futhi kusukela ngaleso sikhathi uye waqhubeka ukweluleka ngokuphathelene neningi lazo zonke uphenyo lwe-DFSA okuholela emiphumeleni yomphakathi.
Sicela uxhumane nathi ngomusa I-DIFC Cases